Kuwa kwekutsvaga system kwakashanda zvakaringana Toralv Østvang makore makumi matanhatu nemana | Ndinobva mac
Iyi nzira yekutsvaga yekudonha inoshanda chaizvo sezvakaratidzwa mumayedzo mazhinji akaitwa payakaunzwa gore rapfuura. Kune zvekare zviitiko zvechokwadi senge zvaToralv Østvang, murume ane makore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa anobva kuNorway uyo anotenda kune yake Apple Watch uye ino yekudonha system yekuona zvirokwazvo yakaponesa hupenyu mushure mekudonha kwakaoma muchimbuzi.
Wachi iyi yakaita basa nemazvo mushure metsaona uye inonzi emergency services otomatiki pakaitika chiitiko ichi. Chokwadi ndechekuti mwanasikana wa Østvang chaiye, akasimbisa mune vezvenhau kuti zvinokwanisika kuti baba vake havana kana kuziva basa iri ravave nechikwereti narwo hupenyu hwavo.
Chinhu chakanakira vanhu vakura vasingade zvekubatsira kunze kwemasevhisi
Ichi ndicho chimwe chezviitiko izvo zvinozove zvinonakidza kune avo vanhu vanozeza kushandisa ekunze masevhisi erubatsiro akabatana neswitchboard kana zvakafanana. Kuva nechengetedzo yechiuno chinosendekwa kunogona kuponesa hupenyu hwemunhu anga apinda mutsaona uye chigadzirwa hachionekwe sechimwe chinhu "chingaite kuti tinzwe takura" asi zvinopesana. Panyaya ya Østvang, ari muNorway svikiro NRK nhau dzakanzwika.
Sezvaunogona kuverenga mubhuku rino, kurohwa kwanga kuri kumusoro uye kudonha muchimbuzi, saka iyo iPhone yanga isipo paari panguva iyoyo. Sezvineiwo zvese zvakaguma mukutya uye ikozvino muchipatara anopora zvakanaka kubva mukukuvara uye vese munhu akakanganisika uye nemhuri vanokoshesa basa rebasa raakaita mune iyi nyaya. Pasina kupokana, kuwanikwa kwekudonha chinhu chinonakidza kune wese munhu uye tinokwanisa kuchishandisa chero zera, kunyangwe zvinouya zvoga zvinogadzirirwa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yekudonha yekutsvaga system yakashanda zvakaringana na67-gore-okuberekwa Toralv Østvang
Nhau shanu dzatinotarisira kune iyo AirPods 2